Igbo, John: Lesson 004 - Ihe kachasị mkpa na okwu nke okwu tupu ejupụta (Jọn 1:1-5) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 004 (The word before incarnation)
A - NKWASI NKE OKWU CHINEKE N'ISE JESU (Jọn 1:1-18)
1. Ihe kachasị mkpa na okwu nke okwu tupu ejupụta (Jọn 1:1-5)
5 Ìhè ahu nāb͕a n'ọchichiri; ọchichiri ahu ejideghi kwa ya.
Ihe niile na Chineke juputara n'ìhè na ịdị ọcha. Ọ na-emeghe ma mara mma. N'ebe ọ na-achị ọ dịghị ihe gbara ọchịchịrị. Ihe niile doro anya, dị ọcha, eziokwu na nsọ. Enweghị ike ịhụ ebe ọ bụla. Mmụọ Nsọ dị ọcha, ìhè nke Onyenwe anyị adịghị enwu ọkụ ma jiri nwayọọ. Ọ na-akasi obi ma gwọọ ya.Ebube nke ìhè nke Kraist adighi etinye aka na mbara igwe. Ha na-abanye n'ime ọchịchịrị ma na-emetụta mgbapụta. Ọ bụ amara magburu onwe ya na Kraịst taa na-enwu n'etiti ọchịchịrị nile. Ọ naghị ahapụ ndị furu efu, ma na-ahapụ ma na-amụba ha.Anyị ga-ekweta na ụwa nke ọchịchịrị dị adị na-emegide ụwa nke ìhè. Anyị amaghị nke ọma otú ọchịchịrị si bịa. Onye nkwusa ozioma John ekpugheghị anyị ihe nzuzo a. Ọ chọrọ ka anyị mara ìhè ma ghara ka anyị leba anya n'ọchịchịrị. Mmadu na mmadu nile wee daba n'ime ochichiri ma tinye uwa nile n'okpuru aka onye ahu.
Ma eleghị anya, ị jụọ, sị: Ọ bụrụ na Kraịst kere eluigwe na ụwa dịka Chineke na ihe dị mma, oleezi otú ọchịchịrị ga-esi abanye n'ime ya? Chineke kere mmadu n'onyinyo ya, ya mere, olee otu anyi si eme ka otuto ya ghara idi taa?John ekwughị aha Setan, na Setan nke nupụụrụ Onyenwe ya isi ma gbalịa imenyụ ìhè ya. Ọ na-emegide Kraist mgbe niile. Ya mere, ọ tụfuru ìhè ahụ e nyere ya. Satan ama enen̄ede ọsọn̄ọ ada onyụn̄ oyom owo inyeneke Abasi. Ọ chọrọ ịrị elu ya iji merie ya. Ọ bụ mgbe ahụ ka ọ ghọrọ onyeisi nke ọchịchịrị.Nwa m nwoke, olee ihe mere i ji ebi ndu? Ị na-achọ ịdị ukwuu, ịkọ ọdịmma na agụụ onwe-gi na-enweghị Chineke? Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, mgbe ahụ, ị ​​ga-abụ ndị nọ n'ọchịchịrị dịka Onye Ọjọọ. N'ihi na ọ nọghị naanị ya, kama ọ dọọrọ ọtụtụ nde mmadụ n'ọchịchịrị ya. Lee ihu nke ndị na-agafere gị n'okporo ámá. Ị na-agụ ìhè ma ọ bụ ọchịchịrị n'anya ha? Ndi obi ha na-egosipụta ọṅụ nke Chineke ma ọ bụ mwute nke Setan?
Ajọ Onye akpọ asị na Chineke n'ihi na nsọ ya ìhè ikpe ya.Ọ chọghị ka ìhè kpughee ihu ya. Ya mere, o zobe onwe ya wee kpuchie onwe ya ma gbalịa imeri Kraịst na ndị na-agbaso ìhè ya. Onye a na-aghọ aghụghọ enweghị ike iburu ìhè nke Onyenwe anyị, ma ọ kpọrọ ya asị. Ọ na-ekpuchi ihu ya ma si otú ahụ enweghị ike ịhụ ìhè ahụ. Ihe di egwu bu na otutu nde mmadu adighi ahu anyanwu Kraist dika o na-enwu n'abali nke nmehie ha. Anyị maara ihe anyanwụ dị. Ọ dịghị mkpa ịkọwa ya. Ọ bụ ya onwe ya ugbu a, na-enwu gbaa, doo anya, na-egbuke egbuke. Nwatakịrị ọ bụla maara na ọ bụ isi iyi ndụ.Mana igwe mmadu adighi ahu ebube nke Kraist na ike ya, n'ihi na ha achoghi ichota ya. Ozizi nduhie na-ekpuchi anya ha dị ka akwa blanket, n'ihi ya, ha na-ajụ ezi ozi banyere nsọpụrụ Kraịst. N'eziokwu, ha achọghị ịchọpụta mmehie ha. Ha achọghị ịbịakwute ìhè ahụ ma chọọ karịa ịnọ n'ọchịchịrị. Ha anaghị agọnahụ onwe ha ma ha ekwupụtaghị mmehie ha. Ha dị mpako ma dị mpako. Ha na-anọgide na-ekpuchi amara nke ìhè Kraịst. Ọchichiri nāb͕a ọsọ megide ìhè, ma ìhè nēripia ya site na ihu-n'anya. Ya mere, ònye ka ị bụ? Ìhè si n'aka Onyenwe anyị ma ọ bụ ọchịchịrị si n'aka Onye Ọjọọ?
EKPERE: Onyenwe anyị, ị bụ ìhè nke ụwa. Anyị na-eso gị n'okwukwe na n'ịhụnanya gị. Anyị adịghị eje ije n'ọchịchịrị, kama anyị natara ìhè nke ndụ. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị hapụghị naanị anyị, na-atụ egwu ọchịchịrị nke iwe Chineke, kama na ị kpọlarị anyị n'ìhè gị doro anya. Mee ka otutu nde mmadu ndi gbara anyi gburu gburu anyi ndi nahughi gi n'agbanyeghi na i na-acho ha gburugburu. Meere anyị ebere ma nye anyị nghọta, O Enlightener!
Gịnị bụ ọdịiche dị n'etiti ìhè na ọchịchịrị n'ụzọ mmụọ nke okwu ahụ?
Ndị na-ejegharị n'ọchịchịrị hụrụ ìhè dị ukwuu;
ndị biri n'ala nke onyinyo ọnwụ,
N'ìhè ha ka ìhè nwuru.
Page last modified on March 05, 2020, at 05:29 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)